Hilton no manindrahindra an'i South Beach ho an'i Tiny Bimini
Beach amin'ny Day, Party Rooftop amin'ny alina ao amin'ny Big New Resort any Bimini
Hilton Resort World Bimini. Saripikan'i Bob Curley
Ny Hilton ao amin'ny Resorts World Bimini dia somary kely (OK, lehibe) avy amin'ny sehatr'i South Beach any Miami no midina any afovoan'ny Nosy Out Out of the Bahamas - feno amin'ny dobo farany ambony sy dobo filomanosana hita maso.
Fialantsasatra goavana any amin'ny nosy kely iray, miaraka amin'ny mety tsara sy ratsy rehetra mitranga. Tsy misy fanontaniana hoe hotely tsara tarehy i Hilton; Ny sisa tavela amin'ny fahitana dia ny fiantraikany eo amin'ny Bimini, toerana iray ao amin'ny Atlantika izay hatramin'izao dia faritanin'ny mpanjono -ny mpanjono sy mpitsidika ao an-toerana izay tonga any amin'ilay nosy ho an'ny mpanjono lalao. Ny fialana any Bimini dia misy fialantsiny betsaka amin'ny mpitaotika, toy ny baomba ambany sy ambany, Bimini Big Game Club Resort sy Yacht Club.
Amin'ny Yacht, Ferry na Seaplane, Bimini dia mahafinaritra ho an'ny faran'ny herinandro na mihoatra
Toerana tsara tarehy an-dranomasina. Saripikan'i Bob Curley
Nalefa tany amin'ny sehatra modules ary avy eo niangona, ny trano fandraisam-bahiny dia loko fotsy manjelanjelatra mifanohitra amin'ny blues sy ny varotra ny lanitra Bahamiana sy ny ranon'i Atlantika tsy misy rano sy mangatsiaka. Misy fomba maro ahatongavana any Bimini - fanompoam-pivavahana tsy tapaka avy any amin'ny faritr'i Miami ka hatrany Bimini dia hiverina indray amin'ny Septambra 2016, ary misy serivisy serivisy tsy tapaka avy any Miami sy Fort Lauderdale. Farany, ny fomba tsara indrindra hahatongavana amin'ny Hilton, dia amin'ny seaplaneana: ny CapeAir sy ny Tropic Ocean Airways dia manolotra sidina an-dalamby ho an'ny varavaran'ny toeram-ponenana.
Jereo ny Hilton Resort World Bimini Rates sy Reviews amin'ny TripAdvisor
Tsidiho ny Bimini Flights amin'ny TripAdvisor
Skandinavian style sy feno fahazavana
Raha vantany vao tafiditra teo am-baravarana ianao, ny fahatsapana avy hatrany momba ilay toeram-pitsangatsanganana dia mazava sy mamirapiratra, manomboka eo amin'ny takelaka solosaina any amin'ny efitra fandraisam-bahiny, ary na dia ny casino aza - angamba ilay hany tokana eto ambonin'ny tany, varavarankely. Mazava ho azy fa nihevitra ireo mpanakanto fa mety hahavotra ny mpiloka amin'ny fomba fijery ny marina sy ny lagoon.
Ny hotely dia manana efitrano 305 sy 18 efitrano, izay manomboka amin'ny laha-diplaoma izay mety tsy hitanao any amin'ny South Beach: ambany ny $ 189 isaky ny alina, midi-maso, amin'ny vanim-potoana ambany. Raha tsy tena IKEA, ny trano fandroana dia tena Scandinavian - fifangaroan'ny hazavana sy ny ala maitso, mavo, tan, ary fotsy hoditra, ary ny famantaran-tsoratra ho toy ny fanatsarana be indrindra.
Ny tranonay dia tsy nijery ny trano fonenan'ny pastell, fa ny sasany kosa niatrika ny rano na tsy nijery ny dobo lehibe ao amin'ny hotely, izay manaloka ny lafiny iray amin'ny tranobe (afaka mandeha eny amin'ny efitrano sasantsasany eny amin'ny faritry ny dobo).
Misakafo amin'ny Pizza, BBQ, Sushi - na Prime Steaks ao Sabor
Seafood tray ao amin'ny Hilton Resort World Bimini. Saripikan'i Bob Curley
Ny safidy fisakafoana an-tsarimihafa dia ahitana ny trano fisakafoanana sushi lehibe iray sy bar-barotra - sady misy toerana lehibe ao amin'ny lobby (mety ihany koa ny hany tokana manana bar iray napetraka mivantana eo ambadiky ny mpanohitra). Hemingways no trano fandraisam-bahiny feno trano, raha i Amici no toerana handehanana pizza na burger (na Starbucks amin'ny maraina).
Ny lakandrana fanasitranana dia manana basy sy labiera avy amin'ireo marina mariazy, raha toa kosa ny Paradise Beach Bar dia safidy tsara ho an'ny zava-pisotro sy sakafo antoandro rehefa mila manana alokaloka ianao aorian'ny fitsangatsanganana eny amin'ny torapasika tsara indrindra ao amin'ilay toeram-pitsangatsanganana, tsotra kely avy ao amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe. Ao amin'ny trano boribory boribory misy tarehimarika manomboka amin'ny ankapobeny, dia i Sabor, trano fisakafoanana mitokana.
Any ivelan'ny vavahady, i Bimini dia tontolo hafa
Stuart Conch Salade Stand, Bimini. Saripikan'i Bob Curley
Ny halehibiazan'i Bimini sy ny halafon'ny lalana eny an-dalambe dia mahafinaritra tokoa amin'ny fanadihadiana an-tongotra na, amin'ny fomba tsara kokoa, amin'ny alàlan'ny fiara-migodra na fiaramanidina golf izay azo alaina ao amin'ilay toeram-pitsangatsanganana. Trano ao an-toerana, bara-pokontany, toeram-pisakafoanana pizza sy fivarotana mivarotra ny mofomamy mofomamy an'i Bimini no manodidina azy rehetra, ary tena manosika antsika hivoatra any ivelan'ny vavahadin-tseranana.
Ny charteran'ny fisakafoanana dia anisan'ireo hetsika malaza indrindra any Bimini, izay manana tranom-bakoka kely, fitsangantsanganana izay ahafahanao manidina amin'ny antsantsa na feso, mandehandeha mankany am- pilaminana ao amin'ny Sapona , ary ilay lohataona malaza amin'ny fanasitranana "Healing Hole" ny loharanon'ny fahatanorana.
Nassau - Blue Water Catamaran snorkeling and Beach Tour
Andron'ny fitsangantsanganana any amin'ny Faritra Atlantis ao amin'ny Paradise Island any Bahamas
Nassau any Bahamas
Ny Top 10 Things to Do in Nassau, Bahamas
Uniworld SS Beatrice Ship Tour sy Profile
Matthews Attractions for Free
Fivarotana fivarotana Hong Kong amin'ny 24 ora
Zavatra atao eo amin'ny morontsirak'i Amalfi
Campland Ao amin'ny Bay RV sy Camping Resort
Toerana tena tsara handehanana any Puglia
Toerana momba ny famoahana komity momba ny varotra sy ny iraka
Zava-madinika momba an'i Westlake, Ohio
Ny Museum of Congress sy ny Inquisition tao Lima, Peroa
New Campground State Brighton State Beach
Te-haka bongo ve ianao? Atombohy amin'ireo 6 tendrombohitra ireo
Halloween Events in Raleigh Durham sy Chapel Hill